डा. केसी हाम्रा लागि, हामी चाहिँ कसका लागि? – Mukundasen Television
| २७ श्रावण २०७४, शुक्रबार १०:४६ , प्रकाशीत
जनताको संवैधानिक, नैसर्गिक अनि आधारभूत अधिकारका रुपमा रहेको स्वास्थ्य र शिक्षालाई सस्तो, गुणस्तरीय र विकेन्द्रित बनाउनुपर्ने मूल माग राखी डा. गोविन्द केसी अहिले ११औं आमरण अनशनमा हुनुहुन्छ। लगभग एउटै प्रकृतिका मागमा ११औं पटकसम्म अनशन बस्न वाध्य बनाउने परिदृश्यले जिम्मेवार पक्षको गैरजिम्मेवारीपनाको पर्दा स्वतः खोलिदिन्छ।
हरेक पटकका अनशनमा एउटै नियति दोहोरिन्छ। डा. केसी अनशन बस्नुअगाडि दिइने अल्टिमेटमको कसैलाई पर्वाह हुन्न। अनशनका केही सुरुवाती दिन सीमित समूह बाहेक अरुलाई चासै हुँदैन। अनि केही समूह डा. केसीलाई गलाउन अनेक हर्कत गर्छन्। डा. केसी आफ्नो अडानमा डेग चल्दैनन्।
अन्ततः डा. केसीको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएपछि उनको समर्थनमा हजारौं मानिस सडकमा आउँछन् र सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुग्छ। फलतः सत्तापक्षले नचाहँदा–नचाहँदै उधारो सम्झौता गरिदिन्छ। यी सम्झौता किन पनि उधारो हुन्छ भने, सरकार सम्झौता त गर्छ तर कहिल्यै कार्यान्वयन गर्दैन। जनताका प्रतिनिधिले गरेका वाचालाई शंकाको सुविधा दिई डा. केसीले अनशन तोड्छन्। विडम्वना, सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै स्वार्थ समूहको चंगुलमा परी सम्झौताको मर्ममाथि प्रहार गर्दै कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना हुन थाल्छ।
र त पहिलो अनशनताका उठाइएको वरिष्ठताका आधारमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को डिन, सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख बनाउनुपर्ने माग अहिले पनि मूलतस् अस्वीकार गरिएको छ। छैठौं अनशनताका सम्झौता गरिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई पंगु बनाइएको छ। स्नातक र स्नातकोत्तरमा मेरिटका आधारमा भर्ना लिई सरकारले तोकेको शुल्क लिने वाध्यकारी प्रावाधानलाई निजी मेडिकल केलज सञ्चालकहरु खुल्लमखुल्ला चुनौती दिइरहेकै छन्।
यद्यपि, डा. केसीका हरेक अनशनले केही न केही उपलब्धि हासिल गरेकै छन्। केही तात्कालिक त केही दीर्घकालिन महत्वका। डेढ वर्षअघि तयार भई एक वर्षयता संसदमा अड्काइएको ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ पनि डा. केसीको अनवरत सत्याग्रहको प्रतिफल हो। हामी र हाम्रा पुस्तालाई उच्चतम ‘उपहार’ हो।
बिरामी र विद्यार्थीबाहेक आफ्नो संसार नभएको बताउने डा. केसी आफ्नो ‘उपहारलाई’ जनताका सेवक भनाउँदाले क्षतविक्षत पारी रद्दीको टोकरीमा मिल्काउन लागेको देख्न नसकेर पुनः सत्याग्रहमा बस्नुपरेको छ।
उनी हाम्रा लागि प्राण दिन तयार छन्। अनशनताका कयौं पटक ‘नियर डेथ’मा पुगेका डा. केसीले बाँचुन्जेल हाम्र्रै लागि लडिरहने प्रण गरेका छन्। हामी करोडांैका लागि एउटा बुढो ज्यान तड्पिरहँदा हामी स्वयम्चाँहि कसका लागि? उत्तर खोज्न विलम्व नगरौं।
डा. केसीले अहिले अनशन बसिरहँदा म केही घटना सम्झिन्छु, ती घटनामा उहाँका मागको साइनो केलाउँछु। अनि डा. केसीको समर्थनमा मुट्ठी कसिन्छ।
२०७२ सालको भूकम्पले मेरो गाउँदेखि १५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको बारबाक क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएको थियो। भूकम्प लगत्तै म घरको अवस्था बुझ्न गाउँतिर लागेँ। गाडीबाट उत्रिएर ६ घन्टा हिँडेपछि गाउँ पुगिन्थ्यो। मुल्चोक भन्ने ठाउँमा पुगेपछि भूकम्पले बेहाल बनाएको दृश्य देख्नुपर्यो। शनिबार पारेर त्यहाँको विद्यालयमा अभिभावक भेला डाकिएको रहेछ। भूकम्पले विद्यालय सखाप पारेछ, भित्र भेलामा रहेका मध्ये तीन जनाको मृत्यु भइसकेको थियो।
त्यहाँ पुग्दा भूकम्पमा पति गुमाएकी एउटी गर्भवती महिला पेट र खुट्टामा चोट लागेर घाइते अवस्थामा थिइन्। उद्धारका लागि हेलिकोप्टर आउला भनेर स्थानीयहरु आकाश हेरिरहेका थिए। अचेत आमाको छेउकै बसेर रोइरहेको दुधे बालक देख्दा मन रोएको थियो।
समय घर्किरहेकाले म घरको अवस्था हेर्न पुग्नै पर्ने थियो। एउटा दाइको सम्पर्क नम्बर लिएर म आफ्नो बाटो लागेँ। अलि माथि पुगेपछि मेरो कानमा हेलिकोप्टरको आवाज ठोक्कियो। मनमा आशा जाग्यो ती घाइते गर्भवती महिलाले उपचार पाउने भइन् भनेर। घर पुग्नेबित्तिकै मैले ती दाइलाई सोधेँ, ‘कस्तो छ बिरामीको अवस्था?’ उनले भने, ‘अस्पताल पुग्दा नपुग्दै बहिनीले प्राण त्यागिन्। डाक्टरले धेरै ढिलो भइसकेको बताए।’
मलाई कयौं दिनसम्म यो घटनाले हल्लाइरह्यो। धन्टौंसम्म स्वास्थ्य सेवा पाउने आसमा आकाश हेरिरहेकी ती महिलाको मृत्यु कुनै कोणबाट पनि स्वभाविक लागेन।
यदि गोरखामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल भइदिएको भए ती महिलाको ज्यान जाँदैन थियो कि। अहिले पनि गोरखाका विकट गाउँका गर्भवती महिला प्रसूति व्यथाले छटपटाउँदा आकाशमै आँखा दौडाउन वाध्य छन्, कहिले हेलिकोप्टर आउला र बाँच्ने आश पलाउला भन्दै।
१० प्रतिशत जनसंख्याका लागि सयौं अस्पताल हुने यो देशमा दूरदराजका गरिबले किन सिटामोलसम्म पाउँदैनन्? सरकारको यो विभेदकारी नीतिलाई एक इमान्दार डाक्टरले शान्तिपूर्ण तवरले विरोध गर्दा कहाँनेर गल्ती देख्नु हुन्छ तपाईंहरु? सामान्य बिसन्चो हुँदा पनि राज्यकोषको ढुकुटी रित्याएर सुविधा सम्पन्न विदेशी अस्पताल ताक्ने राजनीतिक नेतृत्वले किन अनुभव गर्न चाहँदैन जनताको पीडा? आखिर डा. केसीले पनि त काठमाडौंमा मात्र सुविधा सम्पन्न अस्पताल, मेडिकल कलेज थुप्रिनु हुँदैन, देशका अन्य भागमा पनि स्वास्थ्य सेवा पुग्नुपर्छ भन्नु भएको न हो।
गत महिना म बिरामी आमालाई लिन गोरखा पुगेँ। छाती पोल्ने समस्याले ग्रसित आमाको फलोअपका लागि चितवन आएको त्यो नवौँ पटक थियो। हरेकपटक डाक्टरले ‘डोज’ घटबड गरी एउटै औषधि दिँदै एक महिनापछि आउने उर्दी दिन्छन्।
२४ घन्टासम्म मुग्लिनको जाममा रोकिएर बल्लबल्ल अस्पताल पुग्नु भएकी आमालाई यो पटकपनि पुरानै औषधि दिएर फेरि महिनापछि आउन डाक्टरले भाका दिए। पछि मसँग आमाले दुखेसो पोख्नु भयो, ‘आवतजावतमै यतिका पैसा र समय सकिसक्यो।
औषधि लिनकै लागि मात्र किन यहाँसम्म आउनुपरेको हो बाबु?’ मैले आमालाई सम्झाएँ, सरकारको विभेदकारी र अदुरदर्शिताका कारण आफ्नो ठाउँमा स्वास्थ्यचौकी र स्वास्थकर्मी नभएकाले सानो उपचारका लागि पनि चितवनसम्म आउनु परेको हो।
अनि आमालाई डा. केसीले हाम्रा लागि आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखी गरिरहेको संघर्षको कथा पनि सुनाएँ। डा. केसी अनशन बसेको थाहा पाउनेबित्तकै आमाले फोन गरेर भन्नु भयो, ‘सधैं एउटा बुढोलाई जीवनमरणको दोसाँधमा पुर्याएर नेताहरुले के चाहेका होलान्?’ आमाको सोचाइको स्तर देखेर मैले आफैंलाई धिक्कारेँ, मेरो पुस्तालाई धिक्कारेँ, जनताका नायकलाई भनाउँदालाई धिक्कारेँ।
अर्को घटना सम्झन्छु, एमबिबिएसमा भर्ना हुनेबेलाको। सरकारले ‘शहिद’ परिवार भनी सिफारिस गरेको, एनजिओको सहयोगमा पढेको तगायतका कागजपत्र बुझाएपछि कलेजले भन्यो, ‘अरु कसैलाई नभन्नु, तिमीलाई ४५ लाखमा मिलाइदिन्छौं (होस्टेल, खाना र अतिरिक्त बाहेक)। म केही बोलिनँ। बिस्तारै थाहा भयो, एउटै कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीबीच कसैलाई ३० लाख अनि कसैलाई ६० लाख रुपैयाँसम्म लिइएको रहेछ।
आफ्नो नजिककालाई कम शुल्कमा पढाएर त्यसको भर्पाइबापत अरुबाट ६० लाख रुपैयाँसम्म लिने ‘वैज्ञानिक तरिका’ कलेजले अपनाएका थिए।
डा. केसीको दशौं अनशनपछि सरकारले मूल्यमा नियमन गरेको भनिरहँदा गत वर्ष ७० लाख रुपैयाँसम्म लिएर भर्ना भएका दृष्टान्तको प्रत्यक्षदर्शी मै हुँ।
यस्ता कयौं घटना अनुभूत गरेपछि म गर्वले भन्छु, ‘डा. केसीले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका माग राखी गरेका आमरण अनशन कुनै लहड होइन। कुनै आवेशको निर्णय होइन। कसैका विरुद्ध होइन। कुनै समूहले उचालेर भएको अनशन हुँदै होइन।’ दूर दराजका गरिब जनताको सेवा गर्दा देखेको दयनीय स्वास्थ अवस्थामा केही परिवर्तन ल्याउने अठोटले थालेको पवित्र कर्म हो। स्वास्थ्य शिक्षा र सेवालाई धन कमाउने माध्यम बनाउने दलाल, व्यापारी र माफियाविरुद्धको युद्ध हो।
अहिलेको यो समयमा हाम्रा लागि लड्ने डा. केसीबाहेक उत्तम पात्र कोही छैन र अझै धेरै समय आउँदैनन् होला सायद।
यसर्थ, हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। डा. केसीका मागको अक्षरश सम्बोधन र कार्यान्वयनको ग्यारेन्टीका साथ अनशन तोडाउने पहल गर्न ढिलाइ हुनु हुँदैन।
जबसम्म डा. केसीले हाम्रा लागि त्यो बुढो शरीर लिएर लडिरहनेछन्, हामीले आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्न सक्छौँ। ढुक्क हुनोस्, आँखा चिम्लेर डा. केसीको अभियानमा लाग्दा कोही दुर्घटनामा पुग्दैन। यो अभियानले हामी र हाम्रा सन्ततिलाई फाइदा नै पुर्याउँछ।
एकपटक मनन गरौं त, डा. केसी हाम्रोलागि आफ्नो प्राण त्याग्न तयार भइरहँदा हामी चुपचाप बस्न सुहाउला? उहाँ हाम्रो लागि लडिरहँदा, हामीले सोच्नै पर्छ हामी चाहिँ कसका लागि मौन छौँ?
(अधिकारी चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थी हुन्)
Source : Swastha Khabar